တောင်ကိုရီးယား Archives - BuzzFeed Myanmar
တောင်ကိုရီယား က အပျင်းပြိုင်ပွဲ
အလုပ်လုပ်ဖို့ပျင်းနေပါသလား? ဟိုသွားဒီသွား လည်းမသွားချင် ဘာမှလည်း မလုပ်ချင် ဖြစ်နေပါသလား? ဒါဆို ဘာအလုပ်မှမလုပ်ရဘဲ ပျင်းနေရုံနဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလား? ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေနိုင်သူတွေအတွက် တောင်ကိုရီယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ ထူးထူးခြားခြား ပွဲလေးတစ်ခုမှာ ဝင်ရောင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပွဲလေးကတော့ ဆိုးလ်မြို့Ichon Hangang ဥယျာဉ်မှာ ကျင်းပတဲ့ အပျင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
လီမင်ဟို နဲ့ပတ်သက်ပြီး FAN အများစု မှားသိထားတဲ့ အရာ……
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားလီမင်ဟိုကတော့ အာရှပရိသတ်တွေရဲ့ သဲသဲလှုပ်အားပေးခံရသူပါ။လီ မင်ဟိုရဲ့ အကြောင်းကိုတော့ သူ့ရဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေက သိထားပြီးကြပါပြီ။လီမင်ဟို အနုပညာ လောကထဲကို ပွဲဦးထွက် ဝင်ရောက်လာတဲ့ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တော်တော်များများ က မှားသိထားကြပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား နဲ့ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ဖျက်သိမ်း
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ နျူကလီးယားပပျောက်ရေး နှစ်နိုင်ငံကြား နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲများအဆုံးသတ်ရေးကို ဆွေးနွေးကြမယ့် တွေ့ဆုံမှုကို မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှ ဖျက်သိမ်းတယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Mister International 2018 မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးနှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းစွဲဖြစ်လာဦးမယ့် Seung Hwan Lee
တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားပြု Seung Hwan Lee ကတော့ Mister International 2018 မှာ ၁၂ယောက်မြောက် International Mister အဖြစ် သရဖူဆောင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဧပြီ (၃ဝ)ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပသွားတဲ့ Mister International 2018 ပွဲမှာ အခြားနိုင်ငံတွေမှ ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း ၂၅ယောက်ကိုကျော်ပြီး Seung က အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတရဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်လွန်းတဲ့ ကြည်နူးစရာ ချစ်ဇာတ်လမ်း
မြောက်ကိုရီးယား မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ခေါက်ဆွဲအေး
ကင်ဂျုံအွန်းရဲ့ သမိုင်းဝင် ခရီးကြောင့် မထင်မှတ်တဲ့ သက်ရောက်မှုကတော့ သူယူလာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါက်ဆွဲအေး ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်မှာ ကင်ဂျုံအွန်းက သူ ခေါက်ဆွဲ ဘယ်လို သယ်လာတယ် ဆိုတာ အရွှန်းဖောက် ပြောပါတယ်။